Ch 8 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 8 John
8:1 Anefa i Jesosy nanohy ho any an-tendrombohitra Oliva.
8:2 Ary nony maraina, dia nandeha ho any amin'ny tempoly indray; ary ny vahoaka rehetra nanatona Azy. Ary nipetraka teo, nampianatra azy.
8:3 Ary ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo nitondra nandroso vehivavy tratra nijangajanga, dia nitsangana teo azy teo anoloan'izy ireo.
8:4 Ary hoy izy ireo taminy: "Mpampianatra, ity vehivavy ity izao vao tratra nijangajanga.
8:5 Ary ao amin'ny lalàna, Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izany anankiray izany. Noho izany, inona no lazainao?"
8:6 Nefa dia nilaza izany mba hizahany toetra azy, ka mba ho afaka niampanga azy. Ary Jesosy niondrika ka nanoratra tamin'ny rantsan-tànany eto an-tany.
8:7 Ary avy eo, raha naharitra nanontany Azy amin'ny, dia nijoro ka nanao taminy, "Aoka izay tsy nanota eo aminareo ho voalohany ny hitora-bato azy."
8:8 Ary nandohalika indray, nosoratany teto an-tany.
8:9 Fa rehefa nandre izany, dia lasa nandeha, tsirairay, manomboka amin'ny lahimatoa. Ary Jesosy irery ihany no sisa, miaraka amin'ny vehivavy nijoro teo anatrehany.
8:10 Avy eo Jesosy, manangana ny tenany, nanao taminy hoe:: "Woman, aiza ireo izay niampanga anao? Tsy nisy nanameloka anao?"
8:11 Ary hoy izy:, "Tsy misy olona, Tompo. "Dia hoy i Jesosy: "Ary tsy hanameloka anao. Mandehana, ary ankehitriny aza misafidy ny ota intsony. "
8:12 Ary Jesosy niteny taminy indray, nanao hoe:: "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao. Na iza na iza manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina. "
8:13 Ary toy izany koa ny Fariseo nanao taminy hoe:, "Ianao manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ny tenanao; ny fijoroanareo ho vavolombelona tsy marina. "
8:14 Jesosy namaly ka nanao taminy: "Eny, na dia manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ny tenako, ny fijoroako ho vavolombelona fa marina, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako.
8:15 Hianareo mitsara araka ny nofo. Izaho tsy mitsara na iza na iza.
8:16 Ary rehefa mitsara, dia marina ny fitsarako. Fa tsy irery Aho, nefa izaho sy Izay naniraka ahy: ny Ray.
8:17 Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy marina.
8:18 Izaho no manolotra fijoroana ho vavolombelona ny tenako, ary ny Ray Izay naniraka Ahy manolotra fijoroana ho vavolombelona momba Ahy. "
8:19 Noho izany, hoy ireo taminy:, "Aiza izay Rainao?"Jesosy namaly: "Tsy Fantatrareo na ahy, na ny Raiko. Raha toa ka mahalala ahy, angamba ianao ho nahalala ny Raiko koa. "
8:20 Izany teny izany no nolazain'i Jesosy tao amin'ny fandatsahan-drakitra, raha mbola nampianatra tao amin'ny tempoly. Ary tsy nisy olona nosamboriny izy, ny fotoany satria tsy mbola tonga.
8:21 Noho izany, Jesosy niteny taminy indray: "Handeha aho, ary ianao no hitady Ahy. Ary ho faty amin'ny fahotanareo. Izay alehako, ianao Tsy tohanao ny handeha. "
8:22 Ary Dia hoy ny Jiosy, "Ve izy hamono tena, fa hoy izy:: 'Izay alehako, ianao Tsy tohanao ny handeha?'"
8:23 Ary hoy Izy taminy:: "Ianareo avy ambany. Izaho avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao.
8:24 Noho izany, Nolazaiko taminareo, fa ho faty amin'ny fahotanareo. Fa raha tsy mino fa Izaho no, dia ho faty amin'ny fahotanareo. "
8:25 Ary toy izany koa hoy izy ireo taminy, "Iza ianao?"Hoy Jesosy taminy:: "Ny Beginning, izay ihany koa ny miresaka aminao.
8:26 Manana zavatra maro hilazana anao sy ny mpitsara. Fa Izay naniraka Ahy marina. Ary ny zavatra efa reko taminy, Izany no miteny ao anatin'ny izao tontolo izao. "
8:27 Ary izy ireo tsy tonga saina fa izy niantso an'Andriamanitra ho Rainy.
8:28 Ary dia hoy i Jesoa taminy: "Rehefa ho voasandratrareo ny Zanak'olona, dia ho fantatrareo fa Izaho no, ary izay manao na inona na inona ho Ahy Aho, fa araka ny Ray efa nampianatra ahy, toy izany koa no lazaiko.
8:29 Ary izay naniraka Ahy dia eto amiko, ary tsy nandao Ahy ho irery. Fa Izaho manao izay sitrany. "
8:30 Raha mbola nilaza izany, maro no nino Azy.
8:31 Noho izany, Hoy i Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino Azy: "Raha hitoetra ao ny teniko, dia ho mpianatro tokoa.
8:32 Ka dia ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. "
8:33 Ary ireo namaly Azy: "Isika no taranak'i Abrahama, ary mbola tsy nisy ny andevo na iza na iza. Ahoana no hoe, 'Ary ho afaka?'"
8:34 Jesosy namaly azy: "Amen, amena, Lazaiko aminareo, fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota.
8:35 Ary ny mpanompo tsy miray ao an-trano mandrakizay. Kanefa ny Zanaka dia hitoetra any amin'ny mandrakizay.
8:36 Noho izany, raha ny Zanaka no anareo tsy ho andevo, dia ho tena ho afaka.
8:37 Fantatro fa ianareo no zanak'i Abrahama. Fa ianao kosa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy nahazo anao.
8:38 Lazaiko izay efa hitako tamin'ny Ray. Ary manao araka izay renareo tamin'ny rainareo. "
8:39 Namaly izy ireo ka nanao taminy hoe:, "Abrahama no rainay." Hoy i Jesosy taminy: "Raha ianao no zanak'i Abrahama, dia hanao ny asan'i Abrahama.
8:40 Fa ankehitriny ianareo mitady hamono Ahy, Izay Lehilahy nilaza ny marina taminareo, izay efa reko tamin'Andriamanitra. Izany no tsy izay nataon'i Abrahama.
8:41 Hianareo manao ny asan'ny rainareo. "Koa, hoy ireo taminy:: "Tsy izahay teraka avy tamin'ny fijangajangana. Iray Ray izahay: Andriamanitra. "
8:42 Dia hoy i Jesoa taminy: "Raha Andriamanitra no Rainareo, Azo antoka fa ianao dia ho tia Ahy. Fa hoy aho dia tonga avy amin 'Andriamanitra. Fa tsy tonga ho Ahy Aho, fa Izy no naniraka ahy.
8:44 You are of your father, ny devoly. And you will carry out the desires of your father. He was a murderer from the beginning. And he did not stand in the truth, because the truth is not in him. When he speaks a lie, he speaks it from his own self. For he is a liar, and the father of lies.
8:47 Whoever is of God, hears the words of God. Izany no antony, you do not hear them: because you are not of God.”
8:48 Noho izany, the Jews responded and said to him, “Are we not correct in saying that you are a Samaritan, and that you have a demon?"
8:49 Jesosy namaly: “I do not have a demon. But I honor my Father, and you have dishonored me.
8:51 Amen, amena, Lazaiko aminareo, Raha misy efa nitandrina ny teniko, dia tsy hahita fahafatesana mandrakizay. "
8:52 Noho izany, ny Jiosy nanao hoe:: "Fantatray ankehitriny fa manana demonia. Efa maty i Abrahama, sy ny Mpaminany; nefa hoy ianareo:, 'Raha misy efa nitandrina ny teniko, dia tsy hanandrana fahafatesana mandrakizay. '
8:53 Hianao va lehibe noho Abrahama rainay, izay efa maty? Ary ny mpaminany maty. Ka iza no manao ny tenanao ho?"
8:54 Jesosy namaly: "Raha mankalaza ny tenako Aho, dia tsinontsinona ny lazako. Ny Raiko no manome voninahitra ahy. Ary hoy ianareo: ny momba azy fa izy no Andriamanitrao.
8:55 Kanefa ianao tsy mbola nahalala azy. Fa Izaho no mahalala Azy. Ary raha izaho no milaza fa tsy fantatro azy, dia ho tahaka anao, mpandainga. Fa Izaho no mahalala Azy, ary mitandrina ny teniny.
8:56 Abraham, ny rainao, Faly mba hahita ny androko; ary nahita izy ka faly. "
8:57 Ary toy izany koa ny Jiosy taminy:, "Hianao tsy mbola dimam-polo taona nahatratra, ary efa nahita an'i Abrahama?"
8:58 Hoy Jesosy taminy:, "Amen, amena, Lazaiko aminareo, mbola ary i Abrahama natao, Izaho dia."
8:59 Noho izany, dia naka vato hitoraka Azy. Fa Jesosy niery, ary dia niala avy tao amin'ny tempoly.